Ukuhamba, Izindawo ezingavamile
I-Chegem Gorge, e-Kabardino-Balkaria, ayimangalisa kakhulu. Ihlukanisa i-republic encane ngesigamu, ukuya ezingxenyeni ezisenyakatho naseNingizimu. Ngaphansi komgogodla ugeleza i-Chegem - umfula, owanika igama lomgogodla nemifula.
Kunzima ukusho ukuthi yini enhle kakhulu emgodini. Izimpophoma ze-Chegem ziyamangalisa ngemibono yazo engavamile futhi enhle. Awugezi phansi ezintabeni, aphuma ngqo emadwaleni. Kubonakala sengathi izinyembezi ze-crystal zesidalwa esikhulu esingaqondakali esivela etsheni. Mhlawumbe, yingakho izimpophoma ze-Chegem zikhala.
Imvula ngayinye inomlando wayo, isiko layo. Inamandla kunazo zonke, okuthiwa "I-Girl's Scythe" (i-Aday-Su), ilandisa ngomlando omuhle. Bathi emzaneni ongaphezu kwamaphepho ahlala amantombazane aziqhenyayo abanezinsimbi ezinde. Ngelinye ilanga, lapho kungahlali khona umuzi, amantombazane aqala ukugxuma emanzini, ebopha amabhande emadwaleni. Bafa, kodwa baqhubeka beqhosha. Ama-braids abo aphenduka amanzi angamamitha angama-30 "Aday-Su", izinyembezi zabo - kwezinye izimpophoma ze-Chegem. Izithombe zalezi zikhukhula zamanzi zivame ukuphumelela ngisho nangomthwebuli wezithombe eziqalayo: izimpophoma zihle.
I-altitude "Abai-Su" ingamamitha angu-70, kodwa ukucindezelwa kwamanzi akufani nalokho ku-"Aday-Su". Emaphethelweni amahlathi kukhona ihlathi lephayini, egcwalisa umoya omanzi ngephunga elimnandi lezinaliti zamapayipi, iphunga lezimbali noma iqhwa elicibilikile (kuye ngokuthi inkathi).
Angisakwazi ukunquma lapho imifula yeKhegem iheha ngaphezulu: ebusika, ekwindla noma ehlobo. Ehlobo kumnandi ukugebha lapho, ekwindla umgogodla ubonakala njengegolide. Ebusika, ama-jets amanzi aphuzayo enza amaflemu amahle kakhulu.
Uma ushiya kancane kancane emithonjeni, ungafika emzaneni weVerkhny Chegem. Ukushayela kwendawo ku-Eltbyub. Lapha kukhona uMbhoshongo Wothando, owakhiwe ngumhlali wangempela wendawo (kuphela owake waphila esikhathini eside esidlule), okwakhiwa manje ubuhle obuhle kakhulu obunothando noma inganekwane.
I-Eltbyu iyimyuziyamu. Akukude noMbhoshongo Wothando kukhona i-Stone of Shame, kunemibhoshongo, efana naleyo eyasiza ekuzivikeleni izitha ze-Swanns.
Ngaphezulu kwalokho - indawo yokuhlala yasendulo, amanxiwa (kahle-agcinwe) wezitebhisi zamaGreki nezithempelini. Abahambi abakhathele bangaphuza amanzi angamaminerali angempela: hhayi emabhodleleni, kodwa ngokuqondile emthonjeni oshaya phansi. Isigodi saseGara-Auz sinika ithuba labavakashi abahlekile.
Kunzima ukubala yonke into eyenziwa yi-Chegem gorge ejabulisa izivakashi.
Kubonakala kimi ukuthi okuhle kunazo zonke akuzona zonke izinto zomlando, nakuba ziyamangalisa kakhulu. Ngami, into eyinhloko ukuzwa kwenkululeko engenamkhawulo, umuzwa wendiza ukuthi imifula yeKhegem ibelethe. Futhi ngiyazi ngokuqinisekile ukuthi angiyedwa kuphela.
Abavakashi abaye bavakashela i-Chegem, bachaza ngentshiseko umoya odakayo wendlala, umqondo wokukhanya, uhlanganisa umzimba womabili nomphefumulo, injabulo encane yothando. Kunzima ukudlulisela ama-owls. Lokhu kufanele kuvezwe.
Ngokushesha uma sekuyisikhathi sokuphumula, ngesibindi uthathe ithikithi bese uya ebusheni kanye nempilo ukuthi izikhukhula ze-Chegem zinike bonke abavakashele khona okungenani kanye.
"Gorny" ski resort. Incazelo nemithambeka, ukubuyekezwa
Denmark (Denmark) - ezweni eNyakatho Yurophu. Umnotho, uhulumeni, inchubomgomo yahulumende